Jereo ihany koa ny ao anatin’ny sisintanin’i Etazonia raha hijery feno ny fiantraikan’ny herisetran’ny ICE amin’ny mpifindramonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2018 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, polski, Italiano, عربي, English
Manampahefanan'ny SWAT Immigration and Customs Enforcement (ICE) ao Etazonia tamin'ny taona 2004. Saripika: Azon'ny rehetra ampiasaina hita tao amin'ny Wikimedia Commons.
Lasibatry ny fanafintohinana sy ny fanamelohana maventy nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay ny politika fanasarahana ny ankizy amin'ny ray aman-dreniny ao amin'ny sisintanin'i Etazonia tanterahan'ny sampandraharahan'ny Immigration and Customs Enforcement (ICE) [Fampiharan-dalànan'ny fifindramonina sy ny fadintseranana]. Efa hita fa tsy dia raharahiana loatra ny fomba ampiharan'ny ICE ny [lalam-p]ifindramonina ao anatin'ny sisintanin'i Etazonia. Tamin'ny jolay 2018 ny ICE no nanao ny iray amin'ny bemidina lehibe indrindra tao anatin'ny taona maro, nisambotra olona mihoatra ny 140 tao amin'ny fanjakan'i Ohio. Niezaka ny fitondram-panjakan'i Trump hanamarina ny fomba fampiharana mahery vaika ny lalam-pifindramonina tamin'ny filazana fa mahatonga ny tanàna ho azo antoka kokoa izany, nefa mety ho marina ihany koa ny mifanohitra amin'izany. Vao ampiharina fotsiny dia efa mandrava ny firafitra ara-piarahamonina ao Etazonia ny fampiharana ny lalàna tontosain'ny ICE.
Efa naneho ny ahiahiny amin'ny fomba ataon'ny ICE mihoa-pahefana, manao bemidina araka ny fanaon'ny miaramila ary ny fironana manondro ny tenany ho [tena] ny polisy ireo mpanandrateny amin'ny resaka fifindramonina. Hatramin'izao fotoana izao tamin'ity taona ity, mpifindramonina fito no maty raha mbola tao amin'ny toeram-pihazonan'ny ICE, arahin'ny tatitra tsy fisian'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho singa voalohany niteraka ny fahafatesana. Tokony hiteraka ahiahy hoan'ny rehetra ny fomba sahisahy anaovan'ny ICE ny bemidina ataony, indrindra rehefa hita fa efa nitazona na nandroaka olom-pirenen'i Etazonia mihoatra ny 20.000 isa hivoaka ny fireneny tsinahy ny ICE.
Mahatratra antsika rehetra ny fampihorohoroana ateraky ny fanafihan'ny ICE ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Any amin'ny vondrom-piarahamonina mpifindramonina aza moa izany tahotra izany miteraka hisitrisitra raha vao hoe hiantso ny polisy, hiara-miasa amin'ny manampahefana na hiseho eny amin'ny fitsarana, ary efa manomboka ho hita izany fiantraikany izany. Nihena 25 isanjato ny fitorian'ny Latinô fanohintohinana ara-pananahana tao Los Angeles tamin'ny taona 2017, raha nijotso 10 isanjato ny fitoriana herisetra an-tokantrano. Any Denver, Colorado, nitatitra ny mpitsara fa nandà tsy hijoro vavolombelona noho ny tahotra hosamborin'ny ICE ireo niharam-boinan'ny herisetra an-tokantrano taorian'ny nisamboran'ny ICE olona maromaro tao amin'ny fitsarana iray tao an-toerana.
Miitatra mankany amin'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa izany tahotra amin'ny fiarovana iraisana izany. Mitarika ny mpifindramonina tsy hitsabo tena ny fielezan'ny tahotra, eny fa na dia ny zanany izay mizaka ny zom-pirenen'i Etazonia aza, ka mampitombo ny faharefoana ara-pahasalamana ho an'ny rehetra. Ahitana fiantraikany mivantana sy azo tsapain-tanana ihany koa ny herisetran'ny ICE. Nahitana vokatra ara-pahasalamana ny Fanadihadiana iray nataon'ny Oniversiten'i Michigan tamin'ny taona 2017 taorian'ny bemidina nataon'ny ICE tamin'ny taona 2008 tao Iowa. Hita tao amin'ny fanadihadiana fa lasa miteraka zaza tsy ampy lanja na tsy tonga volana ny vehivavy Latina, ary tafiditra amin'izany ihany koa ireo mizaka ny zom-pirenen'i Etazonia taorian'ny bemidina.
Raha voarakitra an-tsoratra ny fiantraikany eo noho eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fiarovana, dia mbola miandry taona maromaro kosa ny fijerena ny vokany ao anatin'ny fotoana lava vao mety ho feno ny fahazoana (fahatakarana) azy. Tsy ny ratram-po mahazo ny zanaka tafasaraka amin'ny ray aman-dreniny rehefa ao amin'ny toeram-pihazonana mpifindramonina ihany no tsikaritra, fa eo ihany koa ny fahatapahana tanteraka amin'ny fanabeazana azy ireo noho ny bemidin'ny ICE. Mpianatra mihoatra ny 500 no tsy nankany an-tsekoly ny ampitson'ny bemidina iray nitranga tao Tennessee atsinanana tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Nitarika anjara asa vaovao ho an'ny manampahefanan'ny sekoly izay efa lasa fahita loatra eo amin'ny mpampianatra, matihanin'ny fikarakaram-pahasalamana ary ny mpiasa ara-tsosialy ny tahotra sy ny tsy fahamarinan-toerana aterak'ireny bemidina ireny ao anatin'ny ezaka hanome karazana taridalana na fanomen'antoka ao anatin'ny fanjavozavoana tanteraka. Fitsapan-kevitra iray natao tamin'ny mpampianatra, mpandraharahan'ny sekoly ary mpanolotsaina miisa 5400 ny fitambaran'ireo, notarihan'ny Tetikasa Zo Sivily ao amin'ny UCLA no nahitana fa mahita ny fanapatapahan'ny mpianatra nifindra monina ny fankanesana any an-tsekoly ho olana ny 68 isanjaton'ny mpitantana, ary ny 70 isanjaton'ny tale sy mpanolo-tsaina mitatitra ny fihenan'ny isan'ny mpianatra nifindra monina ao anatin'ny taom-pianarana.
Tsy mba misy mpanonona izany fahavoazana mahazo ny hafa izany any anatin'ny resaka momba ny fifindramonina sy ny fampiharan-dalàna, fa asongadiny kosa ny sandany ara-olombelona mihatra amintsika rehetra. Mihazona mpifindramonina betsaka kokoa noho ny firenena hafa eto amin'izao tontolo izao i Etazonia, ary ahiana hamolavola indray ny toetran'ny firenentsika ny fisidinan'ny tetibolan'ny ICE sy ny fielezan'ny politikam-pihazonana.
Mazava tsara ny loko amin'ny fanangonam-porofon'ny fiantraika mandravarava ateraky ny fampiharan-dalàna ataon'ny ICE sy ny fandravaravana aterak'ireny lalàna ireny eo amin'ny fiarahamonintsika. Tsy maintsy miara-mijoro isika hiarovana ny vondrom-piarahamonintsika sy hiantsoana fampitsaharana ireo politikan-dalàna mamotika izay manasaraka ny fianakaviantsika sy mampikoa ny firafitry ny vondrom-piarahamonintsika.
Nivoaka voalohany tao amin'ny Common Dreams ny endrika iray amin'ity lahatsoratra ity.